ओखलढुंगामा दुखद दुर्घटना दुई जनाको मृत्यु. - Deshko News Deshko News ओखलढुंगामा दुखद दुर्घटना दुई जनाको मृत्यु. - Deshko News
ओखलढुंगामा दुखद दुर्घटना दुई जनाको मृत्यु.
ओखलढुंगा,असार ,२० – सुनकोसी गाउँपालिका ८ मा भएको जीप दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मुलखर्कबाट ओखलढुंगा आउँदै गरेको बा १५च ८८४३ नम्बरको जीप रोकेको ठाउँबाट चिप्लिएर भीरमा खसेको हो ।दुर्घटनामा परेर सुनकोसी गाउँपालिका–८ का ललीमाया थापा मगर र डिल्ली दर्जीको ज्यान गएको हो ।
मगरको घटनास्थलमै र दर्जीको उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमा ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ । जीपमा सवार चार जना घाइते भएका छन् । घाइतेको सनाखत हुन सकेको छैन । उनीहरुलाई उद्धार गरेर सामुदायिक अस्पताल ओखलढुंगामा उपचारका लागि पठाइएको सुनकोशीगाउँपालिकाका अध्यक्ष रुद्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।